Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo lagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDiyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo lagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow Garoowe
July 11, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo la sawiray iyaga oo dul maraya deegaanada u dhow Garoowe. [Xigashada Sawirka: Radio Daljir]
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh ayaa alagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow caasimada Puntland ee Garoowe, sida uu sheegay goobjooge.
Qof goobjooge ah ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in uu arkay saddex diyaaradaha dagaal oo dul marayay deegaanada u dhow Garoowe shalay galab oo Isniin ahayd.
“Waxaan indhahayga saaray diyaaradaha dagaal oo aan la garanayn cida leh oo ku duulayay jawi hoose ee hawada deegaanada u dhow Garoowe,” goobjoogaha oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa sidaa u sheegay Puntland Mirror.
“Diyaaradaha dagaalka ayaa ahaa ugu yaraan saddex xabo.” gobjoogaha ayaa intaas ku daray.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa la xiriiray saraakiisha Puntland si ay uga hadlaan, balse ma jirto wax jawaab ah oo ka timid saraakiisha ilaa iyo hadda.
June 6, 2017 Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda magaalo xeebeedka Kismaayo
Puntland Security Forces captured at least 14 Al-Shabab members in remote area near Garowe